School sokusebenza kwengqondo kanye nomsebenzi nezingane onamakhono
Kukhona akulona iqiniso ukuthi imizamo eyinhloko wezifo esikoleni kufanele iqondiswe izingane ezinezinkinga zokuziphatha. Ngesikhathi esifanayo, it is ukhohliwe ukuthi umsebenzi nezingane onamakhono futhi umsebenzi ohamba phambili. Uma umndeni ingane kumele kube lokubona isikhathi, isikole kuyadingeka ukuze sibasekele, ukuthuthukisa kanye ukulungiselela phansi ezidingekayo ukuze kuqaliswe esikhathini esizayo.
Ekuphileni kwethu kwansuku zonke, ithalente ubhekwa lahlotshaniswa nokuba ithalente, e-Psychology we kwencazelo umqondo kuhlukile kancane. Lena imfanelo yobuntu, njengoba kubonakala kula ukuthuthukiswa yimpumelelo kwanoma iyiphi imisebenzi, ngenkathi ugcina ne isithakazelo kubo. Khulisa ukuthi enjalo ingane ungungqondongqondo, onekhono umuntu kuncike, ikakhulukazi, futhi wacabanga umsebenzi nge kahle kanjani izingane onamakhono esikoleni.
Okokuqala kudingeka sithole izingane ezinjalo. Kukhona abafundi ngubani nje ivelele ngokumelene ontanga yabo. Ezimweni ezinjalo, ngokuvamile usizo isazi sokusebenza kwengqondo libhekisela uthisha. Ngezinye izikhathi, ku imiphumela elimisiwe amasu nokuhlelwa, wabathola yena. Kunoma ikuphi, anele ekuxilongweni ukuhlolwa classical (isib Ayzenka, Amthauera et al.). Okulandelayo, ucwaningo eningiliziwe zobuntu futhi izici abafundi.
Kuvele okufana okahle lapho umsebenzi wenziwa nezingane onamakhono esikoleni sabaqalayo. Phela, uma usheshe uqala, kulapho cishe uyothola imiphumela emihle. Ukukhuthaza amakhono zokudala kwezingane Kwenziwa kokubili ekilasini futhi emisebenzini yangemva kwesikole. Kungcono awubandakanye ezihlukahlukene imibuthano nezigaba eduze izithakazelo zabo.
Uma ekilasini ukusebenza nezingane onamakhono labetibambile kaningi uthisha, isazi sokusebenza kwengqondo kwamabili ukuphakama emahlombe, kanye uthisha ekilasini, unomthwalo wemfanelo ngoba konke okunye. Kumele kukhunjulwe ukuthi laba bafundi babe inombolo yezinkinga ezihambisana ukujwayeza ukuba iqembu futhi esikoleni sisonke. Ngokwesibonelo, ezimweni eziningi, awayona nesithakazelo ontanga imidlalo sekukudala ncane, ingabonakala kusuka lokhu ngabodwa futhi "isimo elinamandla". Avame libhekene izixazululo ezintsha futhi zokungazimiseli ukulalela izindinganiso owamukelwa. Mayelana isidingo yangaphakathi ukuphelela, abafundi abaningi abaneziphiwo livela ukuzenyeza futhi kudale nomuzwa ukungeneliseki.
Isikhathi ukuqaphela futhi ulungise lezo nezinye izinkinga - lokho omunye imisebenzi eyabelwe sona leso sazi sengqondo esikoleni. Futhi, umsebenzi nezingane onamakhono kuzomele sifake izinkulumo kanye nemihlangano yokufundisa kanye nothisha babo. Othisha bavame ukwesaba futhi ugweme lezi abafundi, njengoba zingacela embuzweni wethu wakuqala, flooring, ngaphezu, zidinga kakhulu ukunakwa. Utitjhere kufanele ukulungele ukuhlanganyela nalaba abafundi ikakhulukazi kahle, ngempela ngiphakamisa ufake ukwaziswa okwengeziwe. Sokuthakazelelwa nasekuqondeni izici ngokwengqondo leli qembu labafundi - omunye izimiso eziyisisekelo, okuyinto kumele zithobele uthisha.
Iphuzu okubalulekile ukuthi kuthakazelise ingane ukufunda, okuyinto okunzima ngempela. Odokotela bengqondo ukuncoma lokufeza ukuhlola amakhono lezi zingane ngokuvamile ngenjongo ethungatha Dynamics. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba afeze cwaningo kanye nezici zabo siqu, kanye nogqozi. olwenziwa ukwelulekwa ngabanye noma amakilasi zokulungisa uma kunesidingo.
Kumele kuqashelwe ukuthi umsebenzi ehleleke kahle nezingane onamakhono sizonikeza abawinile imincintiswano nemincintiswano emazingeni ahlukene, kanye ubuntu multi-abanamakhono, impumelelo lapho siye saba nengxenye ekwenzeni ngendlela encane, futhi isazi sokusebenza kwengqondo esikoleni.
Cerebral palsy e izinsana: Izimpawu kanye Izimbangela
Okubalulekile ukwazi: ngesilinganiso bilirubin usana olunezinyanga ubudala.
Recipe "Royal khekhe ne cottage shizi": dessert ephelele etafuleni iholide
Isikhunta efulethini - abhubhise bonke izindlela
Lapho ukukhululwa kwe "Transformers 5?" Izinsuku emhlabeni futhi kwesizini Russian